Karaiba: Fisaina Ho An’ny Andro Iraisam-pirenena Ho An’ny SIDA · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Desambra 2011 12:44 GMT
Tamin'ny 1 Desambra teo ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny SIDA. Ny lohahevitra nentina tamin'ity taona ity dia hoe “Mijotso hanatratra ny aotra”, izay, raha amin'ity teninà mpitoraka bilaogy Karaiba ity, dia midika hoe miezaka “manatratra ny tanjona 3 : Tsy misy fifindran'aretina VIH vaovao. Tsy misy fanavakavahana. Tsy misy fahafatesana azo avy amin'ny SIDA. Raha avadika amin'ny fiteny hafa dia hoe, miarova tena, ‘ndeha hanao fitiliana, poteho izay takaitra mifandray amin'ny resaka SIDA. Andeha jerena ny antony nahatonga azy ary andeha hanao hetsika amin'izy ireny.”
Niara-nientana taminy ireo iray faritra aminy nitondra ny fomba fijerin'izy ireo sy ny fanohanana amin'ilay ady atrehana amin'ny VIH sy ny SIDA.
Nanaraotra ity fotoana ity ihany koa ny Girl With a Purpose na Tovovavy Jamaika manana Tanjona mba hanaovana antso tsy fanaovana firaisana ara-nofo mialoha ny fanambadiana tamin'ireo tanora:
Any Jamaika, olona 32,000 no voan'ny SIDA fa tsy mahalala izany akory ny antsasak'ireo. Izay hoe olona iray amin'ny 9. (Manana mponina miisa maherin'ny 2.7 tapitrisa i Jamaika).
Na dia manampy ireo olona mitondra ny tsimok'aretina VIH sy efa anatin'ny SIDA hanana fiainana maharitra kokoa aza ny fandrosoan'ny teknolojia, dia mbola hita eny ihany ny takaitra maneho ny fitondran'izy ireo ny tsimok'aretina.
Miantso ireo tanorantsika aho:
Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fahasalamanao.
Hainy fa manimba ny fanahin'ny olona ny firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana.
Mety hahafaty anao ny tsy fahafantarana momba ny firaisana ara-nofo sy ny fanaovana firaisana ara-nofo voaaro.
Tsy handositra ny firaisana ara-nofo… Mifantoha amin'ny fampandrosoana anao iray manontolo: ny fanahinao, ny sainao, ny fahasalamanao, ary ny vatanao.
Ny mpiray tanindrazana aminy , The Wickedest Time, dia naneho fomba fijery telo mikasika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny SIDA eto, eto ary eto; ahitana toy izao ny fanazavana sasany:
Tena misy ny SIDA ary anjaranao raha te ho tompon'andraikitra ianao, mampiasa fiarovana, manaova fitiliana matetika, ary aza jamba sy matimatin'ny tsara tarehy sy tsiky mahafinaritra fa ny olona atokisanao ho tena marina sy mendrika ny hiaraka aminao mandritra ny androm-piainanao eo ambany fitantanany ihany no ekeo.
Tokony ho taitra amin'ity areti-mifindra ity bebe kokoa eo amin'ny fiainana andavanandro ny olona– fa tsy hoe amin'ity andro manokana ity ihany. Tsy dia tsara loatra hoe hazavaina ao anatinà iray andro ity areti-mifindra dia arahana fahanginana ny andro 364 hafa.
Tokony hiezaka bebe kokoa isika mampianatra ny vahoakan'izao tontolo izao mikasika ny iray amin'ireo aretina tena mahafaty hatreto satria tena hita mazava izao fa efa ambony be ny tahan'ny olona tratry ny aretina. Miaraka aminà fampianarana kely mikasika ny fomba hiarovan-tena na mikasika ny zavatra tokony hataonao raha tratran'ny aretina ianao, tsy ho voafehy ny firongatr'ity olana ity.
Andro iray izay tiantsika hanapariahana ny fahatsapan-tena, fa tsy ny aretina. Ny SIDA no areti-mifindra TENA mahafaty indrindra voasoratra amin'ny tantara. Tsy hanafoana azy mihitsy akory ny tsy firesahana momba izany. Ny hany zavatra tokana azonao atao dia ny miaro tena.
Any an-kafa any St. Lucia, etsy andaniny, nanontany tena i Alien in the Caribbean raha iray amin'ireo alaolan'ny fianahan'ny areti-mifindra SIDA ny “fanaovana firaisana anaty fifankatiavana marina sy ny fanaovana firaisana ara-nofo voakajy eo amin'ny olon-droa miaraka”. Notohizan'ilay mpitoraka bilaogy tamin'ny fanazavana ny antony mahatonga azy hahatsapa fa rehefa resaka mikasika ny firaisana voakajy no atao eo amin'ny faritra, dia ny hany ao an-dohan'ny olona avy hatrany dia hoe ny fitsofohana eo amin'ny maha-vehivavy fa tsy mba misy zavatra hafa” :
Tena mampalahelo ahy ity tsy fisian'ny fahiratan-tsaina lalina ity, indrindra hoe misy zavatra an-jatony maro sady miaro no tsara azon'ireo olon-droa atao, na dia hoe olona mitondra ny tsimok'aretina VIH aza ny iray, hifampizaràna ny fiainany manokana sy ny fahafinaretana. Ka noho izany no mahatonga ahy hametraka ny fanontaniana hoe ‘Azo lazaina ve fa ny tsy fisian'ny fahiratan-tsaina amintsika, raha ny firaisana ara-nofo no resahina, no iray amin'ireo antony maro mahatonga ny SIDA miparitaka haingana eto amin'ny faritra?’
Angamba raha mifantoka kokoa amin'ny kalitaon'ny traikefantsika amin'ny resaka firaisana ara-nofo isika fa tsy amin'ny habetsahany isan'ny “fahafahana nanao ‘partie’ iray” (indrindra ho an'ny lehilahy), dia ho mora kokoa ny hametraka ny hoe firaisana ara-nofo nandeha hoazintsika ho firaisana ara-nofo ieren-doza. Ny marina dia mifamatotra ny firaisanara-nofo ieren-doza sy ny fanaovana firaisana milay.
Manome soso-kevitra izy aty afara hoe:
Azo avy amin'ny karazana fifankahazoana manokana izay manome làlana amin'ny fifaneraserana, ny zavatra mikasika ny fahafinaretan'ny iray ary koa ny fahasalamany, ny fifankahalalana miaraka, ny fifampizaràna faniriana sy fientanentanana ary ny fahalalahana mahatsiaro fa voaaro ao anatina fifandraisana ara-pitiavana ny firaisana ara-nofo tsara. Ny tombony, mety hihena ihany koa ny ankamaroan'ireo tsy fifanajana izay matetika miteraka ny fiparitahan'ny SIDA raha toa ka mifanome fahafaham-po eo amin'ny firaisana ara-nofo ny isan-tokony.
Amin'izao vaninandro sy taonan'ny areti-mifindra SIDA izao, ny tsirairay dia mety hiandry ny fahiratantsika mba hitombo hiala lavidavitra kokoa amin'ny resaka firaisana ara-nofo bontolo fotsiny. Dia notohizantsika fotsiny izao ireo fihatsaram-belatsihy sy henatra efa lany andron-dry zareo. Tsy nitondra fanampiana mivelatra be eo amin'ny firaisana ara-nofo isika, ny torohevitra amin'ny firaisana ara-nofo, ny torohevitra ho an'ny olon-droa miaraka na fampianarana misokatra sy marina mikasika ny fananahana sy ny firaisana ara-nofo. andritra izany fotoana izany anefa dia mbola mamelona foana ny fomba fanaovana firaisana ara-nofo taloha foana isika eo amin'ny mozikantsika sy ny kolotsainantsika.
Tsy tongatonga foana ny hoe ireo firenena ahitàna ny tahan'ny olona mitondra ny VIH ambony indrindra dia ireo firenena izay mbola mitazona be ny fomba aman-panao taloha, mihidy sy voafatotry ny fivavahana feno fihatsaram-belatsihy momba ny firaisana ara-nofo
Monina any Trinidad sy i Tobago , i Globewriter dia nampakatra ny sarin'i Matthew Shepard miaraka amin'ny fanambarana iray avy amin'ny fikambanana izay natsangana ho fahatsiarovana azy, manolotra ity lahatsoratra ity:
Ho an'ireo izay rehetra lavon'ny aretina ary nankahalaina ary koa ho an'ny fanantenana amin'ny hoavy tsaratsara kokoa.
Namarana tamin'ny naoty feno fanantenana i Havana Times :
Tsy misy fifindran'aretina VIH vaovao. Tsy misy tranganà fanavakavahana. Tsy misy fahafatesana azo avy amin'ny SIDA, ireo no tanjona napetraky ny fanapahan-kevitry ny UNAIDS.
Na dia toa tsy ho tratra mihitsy aza ity tanjona ity, dia milaza ny manam-pahaizana fa namelabelatra fandaharan'asa sy fomba fiarovana mora i Kioba izay ahitana ny asa fikarohana, ny fitsapana, ny fiofanana ary koa ny fanoroana hevitra ny sarambabem-bahoaka, raha ny tatitry ny PL.
Fivoarana lehibe no hita teo amin'ny nosy teo amin'ny asa natao mikasika ny VIH/SIDA, izay nitondra tamin'ny fampivoarana ny kalitaon'ny fiainan'ireo marary, nanondrotra ny taham-pahavelomana ary nampihena ny fahasarotana.
Avy amin'i Auntie P ny hajiantsary nampiasaina ato amin'ity lahatsoratra ity, Kofehy fanairana amin'ny SIDA, nampiasaina teo ambany Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0) Creative Commons license. Tsidiho ny Sary mifandimbin'i Auntie P ao amin'ny flickr.